एकै दिन इटलीमा ३६८ को मृत्यु, इरानमा थप १ सय १३ र स्पेनमा ९६ ले ज्यान गुमाए, अरू देशमा कति? – Live News
एकै दिन इटलीमा ३६८ को मृत्यु, इरानमा थप १ सय १३ र स्पेनमा ९६ ले ज्यान गुमाए, अरू देशमा कति?
चैत ३,२०७६ ।
विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपको रूपमा फैलिएको नोवल कोरोना भाइरस एकै दिन इटलीमा कोरोना भाइरसले ३ सय ६८ जनाको ज्यान लिएको छ । हाल सम्मचीन बाहिरमात्रै २ हजार ५ सय ३१ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
हिजो आइतबार सम्म विश्वका १५६ देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको छ।इटलीमा ३ हजार ५ सय ९० जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यो सँगै इटलीमा भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या २४ हजार ७ सय ४७ पुगेको छ। हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण इटलीमा १ हजार ८ सय ९ जनाको ज्यान गइसकेको छ।
यस्तै, इरानमा आइतबार कोरोना भाइरसका कारण थप १ सय १३ जनाको मृत्यु भएको छ। इरानमा सोही दिन १ हजार २ सय ९ जना नयाँ कोरोना भाइरसका बिरामी पहिचान गरिएको छ। यो सँगै इरानमा कोरोना भाइरसबाट १३ हजार ९ सय ३८ जना सङ्क्रमित भएका छन्। हालसम्म इरानमा कोरोना भाइरसबाट ७ सय २४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
आईत बार चीनमा थप १४ जनाको ज्यान गएकोे छ भने स्पेनमा थप ९६ जनाको ज्यान गएको छ । फ्रान्समा ३६ जनाको ज्यान गएको छ। यसै गरी कोरोना भाइरसका कारण जर्मनीमा २ जना दक्षिण कोरियामा ३ जना र स्विजरल्यान्डमा १ जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। युकेमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने अमेरिकामा थप ११ जनाको ज्यान गएको छ ।
यस्तै, नेदरल्यान्ड्समा ८ जना , जापानमा २ जना, स्विडेन, डेनमार्कमा १र१ जनको मृत्यु भएको छ। बेल्जिएममा १, ग्रीसमा १, फिलिपिन्समा ४, हंगेरि, ग्वाटेमाला र अल्जेरियामा गरेर १-१ जनाको ज्यान गएको छ।
यसैगरि विश्वभर भाइरसबाट ज्यान जानेको संख्या ६ हजार ५ सय १५ पुगेकाे छ ।
Spain 7,845 +1,454 292 +96 517 7,036 272 167.8
France 5,423 +924 127 +36 12 5,284 400 83.1
China 80,858 +14 3,213 +14 67,752 9,893 3,226 56.2
USA 3,714 +771 68 +11 73 3,573 10 11.2
Philippines 140 +29 12 +42126 1 1.3
Germany 5,813 +1,214 11 +2 46 5,756269.4
San Marino 109 +87+2498 11
Sweden 1,040 +793+1 1 1,0362103.0
Guatemala 1 1 +100.1
Norway 1,254 +14531 1,250 27 231.3
Canada 341 +89 1 11 329 1 9.0
Czechia 293 +104 293227.4
Bahrain 214 +2 77 1372125.8
Brazil 200 +49 1 19920.9
Iceland 180 +19 180 1
Ireland 170 +4121 167634.4
Egypt 126 +16227 97 1.2
Poland 125 +21313 10933.3
Iraq 124 +14 10 26 88 3.1
Saudi Arabia 118 +152116 3.4
India 112 +12213 97 0.1
Luxembourg 77 +26 1 76
Peru 71 +28 71 2.2
Slovakia 61 +17 61 11.2
South Africa 61 +23 61 1.0
Argentina 46 +1244 1 1.0
Mexico 43 +17439 1 0.3
Ecuador 37 +9235 1 2.1
Costa Rica 35 +8 3536.9
Cyprus 33 +7 33 1 27.3
Turkey 18 +12 18 0.2
Venezuela 17 +15 17 0.6
Lithuania 14 +5 1 13 5.1
Macao 11 +1 10 1
Jordan 10 +9 191.0
Puerto Rico5+151.7
Rwanda5+450.4
Cameroon4+140.2
Uzbekistan4+440.1
Seychelles3+1 3
Bahamas 1 +1 1
Total: 169,415 12,762 6,515 682 77,450 85,450 5,921 21.7